In kasta oo ay jiraan tobanaan sababo oo ah in rakibiddaada WordPress ay si gaabis ah u socoto (oo ay ku jiraan qoraallo iyo mawduucyo si liidata u qoran), waxaan aaminsanahay sababta keliya ee ugu weyn ee dadku u leeyihiin dhibaatooyinka inay tahay tan shirkadda ay martigelinayaan. Baahida dheeraadka ah ee badhannada bulsheed iyo isdhexgalka ayaa sii murginaya arrinta - in badan oo ka mid ah ayaa si aad ah u hooseeya sidoo kale.
Waxaan u haajirnay in kabadan 50 macmiil Flywheel guud ahaan iyada oo aan ka yareyn 50 rakibidda WordPress ah, dhammaantoodna si aan hagaagsaneyn ayey u baxeen. Iyo Flywheel waa ku taliyay martigelinta WordPress!
Taageerada WordPress - Kuuma sheegi karo waqtiyada aan la galnay martida oo ay si toos ah ugu eedeeyeen WordPress digniinta aan la taageerin (in kasta oo ay had iyo jeer haysteen 1-guji rakib). Arimaha ogolaanshaha, arimaha kaydinta, arimaha amniga, arimaha waxqabadka… adigu magacow, waan ku dhex galnay oo martigaliye kastaaba wuxuu eedeyey WordPress.
Taageerada Hay'adda - waa faa iido weyn in macaamilku leeyahay koontada laakiin waxaa naloogu daray sidii isticmaaleyaal idman, isticmaaleyaasha taageerada idman, iyo kuwa isticmaala FTP ee la oggol yahay. Haddii macmiil naga tago, way sii joogi karaan Flywheel oo ay sii wadaan guushooda. Mar dambe ma dhici doonto in macaamiisha la haysto ama ay ku jiraan xilli hijrood ah oo aan raaxo lahayn.
Dhoolatus - awoodda si aan kala go 'lahayn loo xiriirin karo goob waa wax cajiib ah. Mar dambe uma baahnin inaan ku martigelino jawi meel kale ka dibna u wareejinno martida, Flywheel Waanu awoodnaa inaanu tusno macmiilka horumarka, aynu u oggolaanno inay soo galaan oo ay u qaataan tijaabo ahaan, oo aan ugu riixno si toos ah dhowr guji oo badhan ah.
hayaan - Kaydinta otomaatiga ah ama 1-guji iyo dib u soo celinta waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. Waxaan haysannay macmiil tijaabinaya is-dhex-dhexaad saddexaad iyo markasta oo dhinac saddexaad yidhaahdo waxay diyaar u yihiin inay noolaadaan, toos ayaan u socon doonnaa wayna ku fashilantay. Waxaan awoodnay inaan isla markiiba soo ceshano goobtii hore ilbiriqsiyo gudahood illaa ay kahelaan kaabayaashoodii baahida.
Performance - kalluumeysiga adag ee adag iyo shabakad gaarsiin weyn ayaa ka dhigtay dhammaan macaamiisheenna inay si fiican u shaqeeyaan. Meelaha degdegga ahi waxay hagaajiyaan mitirka beddelka iyo xitaa darajooyinka mashiinka raadinta… waa qayb muhiim ah oo aynaan u baahnayn inaan ka walwasho.
WP Cache - marka lagu daro mashiinka keydka Flywheel, waxay sidoo kale si buuxda u taageeraan WP Cache iyo Rabshad WP plugin. Qalabkaas waa mid la yaab leh - oo leh awood culeys caajis ah, yareyn, isu-soo-uruurinta, dayactirka keydka xogta, iyo awooda hore ee kaydinta. Waa shey qiimihiisu maalgashi yahay!
Diyaarinta - Flywheel waxay leedahay awood waxqabad xoog leh oo ay awood ugu yeelan karaan mid kasta oo ka mid ah boggagaaga, adiga oo awood kuu siinaya inaad ku soo koobto goobtaada goob wax lagu diyaarinayo, cusbooneysii goobta la diyaariyey, oo aad dib ugu riixdo inaad ku noolaato markaad diyaar tahay. Waa aalad layaableh oo waajib ku ah qof kasta oo doonaya inuu cusboonaysiin muhiim ah ka sameeyo barta ay ku sugan yihiin - sida u cusboonaynta mawduuc cusub.
Waxaan helnay caawimaad ka Flywheel injineerada arrimo dhowr ah horeyba. Waxaan soo marnay goobo la jabsaday oo kooxdooda ay keeneen khubaro xagga amniga ah si ay u aqoonsadaan arrinta (sida caadiga ah fiilo) oo ay saxaan. Waxaan soo marnay goobo ay ka jireen arrimo waxqabad oo kooxdooda (iyo interface-keeda) ay naga caawiyeen xallinta iyo saxitaanka. Waxaan helnay goobo qaatay 10 ilbiriqsiyo ah oo aan ku soo dhignay marti-geliyeyaal kale oo wax ka yar 2 ilbiriqsi ku socda Flywheel.